Edelweiss Hadda Waxay Bixisaa 2 Xiriir Toddobaadle ah oo ka socda Zurich ilaa Tansaaniya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Edelweiss Hadda Waxay Bixisaa 2 Xiriir Toddobaadle ah oo ka socda Zurich ilaa Tansaaniya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Edelweiss Zurich ilaa Tanzania oo ay salaameen mas’uuliyiin
Diyaaradda firaaqada ee Switzerland, Edelweiss, ayaa duulimaadkeedii ugu horreeyay ee rakaab ah geysay Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Kilimanjaro (KIA) oo si toos ah uga socota Zurich, iyada oo rajo rajo gelisay warshadaha dalxiiska ee bilyannada doolarka ah ee Tansaaniya.
Edelweiss waxay ka soo degtay Airbus A340 KIA Oktoobar 9, 2021, oo dib u soo ceshatay waaxda dalxiiska duulimaadka ee Tansaaniya.
Diyaaradda ayaa lagu soo dhaweeyay salaan biyo -doon iyo dhowr mas’uul oo Tanzania ah.
Daahfurka Edelweiss ayaa loo arkaa codka kalsoonida Tansaaniya oo ah meel ammaan u ah ganacsiga, gaar ahaan dalxiiska firaaqada, taas oo ay ugu wacan tahay baratakoollada caafimaadka iyo badbaadada ee jira.
Edelweiss, oo ah shirkad ay walaalo yihiin Swiss International Air Lines oo xubin ka ah Kooxda Lufthansa, waxay leedahay ku dhawaad ​​20 milyan oo saldhig macmiil adduunka oo dhan.
Oktoobar 9, 2021, gabadh Edelweiss Airbus A340 ayaa ka degtay KIA, oo ah marin weyn oo loo maro wareegga dalxiiska waqooyi ee Tansaaniya, iyada oo ay saaran yihiin 270 dalxiisayaal ah oo ka kala yimid Yurub oo dhan, taas oo muhiimad weyn u leh xilliga dalxiiska.
Diyaaradda ayaa lagu salaamay salaan biyo -doon kadib markii ay si guul leh u taabatay dhabbaha JRO 8:04 am ee Waqtiga Afrikada Bari, iyadoo ay ka mid yihiin Golaha Wasiirrada ee u xilsaaran Hawlaha iyo Gaadiidka iyo sidoo kale Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska, Prof. Makame Mbarawa iyo Dr. Damas. Ndumbaro, siday u kala horreeyaan, oo ay la socdaan Wakiilka UNDP ee Tansaaniya, Ms. Christine Musisi; Safiirka Switzerland, Dr. Didier Chassot; iyo Maareeyaha Guud ee Kooxda Lufthansa Koofurta iyo Bariga Afrika, Dr. Andrea Shulz ayaa dadweynihii u horkacayey ku farxay soo -dejinta taariikhiga ah ee diyaaradda.
“Daahfurka Edelweiss waa codka kalsoonida Tansaaniya oo ah meel aamin u ah ganacsiga, gaar ahaan dalxiiska firaaqada, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan hab -raaca caafimaadka iyo badbaadada ee jira si loo hubiyo in safarka cirka uu badbaado yahay oo uusan ku faafin Coronaviruses adduunka oo dhan,” Prof. Mbarawa ayaa yiri iyada oo ay farxad ka muuqato dabaqa.
Wuxuu intaas ku daray: "Edelweiss wuxuu bixiyaa xiriir muhiim u ah wareegga dalxiiska waqooyi ee Tansaaniya oo leh xuddunta ugu dhaqsaha badan Yurub ee warshadaha duulista ee maanta iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee adduunka oo dhan, oo ku neefsanaya nolol cusub dalxiiskayaga, warshadaha dhaqaalaha ee muhiimka ah."
Wasiirka Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska, Dr. Damas Ndumbaro, ayaa sheegay in Edelweiss oo bixisa 2 xiriir toddobaadle ah oo ka socda Zurich, Switzerland, ilaa Tansaaniya aysan ahayn oo kaliya xabbad ku dhacday dalxiiska xanuunsan laakiin sidoo kale ay calaamad cad u tahay kalsoonida sii kordheysa ee warshadaha socdaalka ee tallaabooyinka COVID-19 ee dalka.
Edelweiss wuxuu ka duuli doonaa Zurich kuna sii jeedaa Kilimanjaro wuxuuna u sii gudbi doonaa Zanzibar Talaado kasta iyo Jimce kasta laga bilaabo ilaa dhammaadka Maarso. Waddada waxaa lagu shaqeyn doonaa Airbus A340. Diyaaraduhu waxay bixiyaan wadar ahaan 314 kursi - 27 Fasalka Ganacsiga, 76 Dhaqaalaha Max, iyo 211 Dhaqaalaha.
Bernd Bauer, oo ah maamulaha Edelweiss, ayaa yiri: “Iyada oo ah hoggaanka ugu sarreeya ee duulimaadyada Switzerland, Edelweiss waxay u duushaa meelaha ugu quruxda badan adduunka. Iyada oo leh Kilimanjaro iyo Zanzibar, waxaan hadda haysannaa 2 goobood oo fasax oo cusub oo la soo bandhigo, kuwaas oo si dhammaystiran u dhammaystiraya baaxaddayada qaaradda Afrika oo u oggolaanaysa martidayada Switzerland iyo Yurub inay ku raaxeystaan ​​waaya -aragnimada safarka ee lama -ilaawaanka ah. ”
Didier Chassot, oo ah danjiraha Switzerland u fadhiya Tansaaniya, ayaa ku farxay markii duulimaadkii ugu horreeyay uu soo degay: “Aad ayaan ugu faraxsanahay in diyaarad Swiss ah ay mar kale si toos ah isugu xirto Switzerland iyo Tanzania. Go'aankan Edelweiss ayaa muujinaya sida aad u soo jiidasho leh Tansaaniya - dhul weynaha iyo Zanzibar - waxay u hadhay dadka Swiss. Waxay sidoo kale muujineysaa kalsooni sii kordheysa oo ku aaddan dadaallada Tansaaniya si wax looga qabto caqabadaha la xiriira masiibada COVID-19 oo leh xallinta iyo hufnaanta lagama maarmaanka ah, oo aan aad u soo dhaweynayno. ”
Duulimaadkii tooska ahaa ee Edelweiss ee KIA waxaa ka mid ahaa, arrimo kale, iyadoo ay ugu wacan tahay iskaashi saddex -geesood ah oo ka socda Barnaamijyada Horumarinta Qaramada Midoobay (UNDP), Ururka Hawl -wadeennada Dalxiiska Tansaaniya (TATO), iyo dawladda iyada oo loo marayo Wasaaradda Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska.
“Aad ayaan ugu mahadcelinayaa inaan goobjoog ka noqdo qaar ka mid ah miraha wada -shaqaynta aan la leenahay Wasaaradda Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska iyo TATO si kor loogu qaado soo -kabashada dalxiiska ee Tansaaniya. Waxaan u hambalyeynayaa Dowladda Tansaaniya, TATO, iyo kooxda maamulka Swissair dhammaan hawsha adag ee na gaarsiisay ilaa maanta, ”Wakiilka Waddanka UNDP, Marwo Christine Musisi, ayaa u sheegtay dadkii ka soo qaybgalay xafladda soo dhaweynta duulimaadka.
Marwo Musisi waxay sheegtay inay dib u soo xasuusatay heerkii ugu sarreeyay qufullada adduunka bishii Abriil 2020 markii UNDP ay hormuudka ka ahayd qiimeynta saameynta dhaqsaha bulshada iyo dhaqaalaha ee Qaramada Midoobey ee COVID-19 ee Tansaaniya, waxaa iska cad daraasaddan in dalxiiska uu yahay warshadaha dhaqaalaha ee ugu daran dalka.
Iyada oo boqolkiiba 81 hoos u dhacday dalxiiska, meherado badan ayaa burburay taasoo dhalisay khasaare dakhli oo aad u weyn, luminta saddex meelood meel shaqooyinkii warshadaha, ha ahaadeen hawl wadeennada dalxiiska, hoteelada, hagayaasha dalxiiska, gaadiidleyda, alaab-qeybiyeyaasha cuntada, iyo ganacsatada.
Tani waxay si ba'an u saameysay hab -nololeedka dad badan, gaar ahaan kuwa yaryar, kuwa yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, shaqaale aan ilaalin, iyo meherado aan rasmi ahayn oo u badan dhallinyaro iyo haween.
"Waxaan u mahadcelineynaa Wasaaradda Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska sida ay u aamintay UNDP oo ah shuraako iskaashi u leh diyaarinta qorshaha soo kabashada iyo joogtaynta COVID-19 ee warshadaha dalxiiska," ayay sharraxday.
Marwo Musisi ayaa si degdeg ah u raacisay: “Waxaan sidoo kale uga mahadcelinaynaa TATO hoggaankooda ku lug lahaanshaha dhinacyada badan ee horseeday mashruuca wadajirka ah ee dib-u-soo-kabashada dalxiiska ee aan hirgelinno kaas oo gacan ka geystay furitaanka wadadan iyo tallaabooyin kala duwan, oo ka shaqeynaya dib-u-furidda suuqyada Yurub, [Ameerika], iyo Bariga Dhexe. ”
"Waxaan rumeysanahay in tani ay tahay bilowgii safarkeenna si aan dib ugu dhisno si ka wanaagsan warshadaha dalxiiska oo loo dhan yahay, adkeysi leh, oo barwaaqo ah," ayay Ms Musisi ku soo gabagabeysay.
Markii ay Edelweiss soo bandhigtay duulimaadyo laba toddobaadle ah, madaxa UNDP waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in Tansaaniya aysan dib u soo ceshan doonin ee ay sidoo kale kordhin doonto, saamiga suuqa dalxiiska ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Maamulaha TATO, Mr. Sirili Akko, ayaa si weyn ugu mahadceliyay Edelweiss iyo UNDP, isaga oo sheegay in taageeradooda ay timid xilligii ugu mugdiga badnaa taariikhda dalxiiska ee dhowaan uu sababay saamaynta masiibada COVID-19.
Dalxiise, Mr. Amer Vohora, ayaa yiri: “Edelweiss ugu dambayntii dib ugu laabashada Tansaaniya waa waqti dheer, duulimaad toos ah oo aad u fiican oo aad ugu habboon oo aad ugu raaxo leh adeeg dhammaystiran, maadaama aan u baahnaan doono inaan marar badan dib u duulo si aan u booqdo Edelweiss Coffee Hantida Waxaan ballansan doonaa duulimaadkayga soo laabashada isla markaan soo laabto. ”